विकास नपुगेका ठाउँमा विकास लैजान्छौँ:सांसद पहारी – Peacepokhara.com
विकास नपुगेका ठाउँमा विकास लैजान्छौँ:सांसद पहारी
पोखरा,२४ कात्तिक । गण्डकी प्रदेश सांसद एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का युवा नेता राजीव पहारीले कास्की क्षेत्र नं. ३ अन्तर्गत प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं २ का नेकपा कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिसँग विकासको योजनाका विषयमा छलफल गरेका छन् ।
सांसद पहारीले निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत पार्टी वडा कमिटी, जनप्रतिनिधि, अगुवा तथा सामाजिक अभियन्ताहरुसँग शनिबार पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट विनियोजनका बारेमा छलफल गरेका हुन् ।
सो अवसरमा सांसद पहारीले विकासको आवश्यकता क्षेत्रगत हिसाबले ठुलो भएकाले सबै ठाउँमा एकै पटकमा पु¥याउन कठिनाई हुने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘आवश्यकता धेरै छ तर क्षेत्र ठुलो भएकाले एकैचोटी सबैठाउँमा विकास पु¥याउन सकिएको छैन । हामीले अध्ययन पनि गरिरहेका छौं । जनताका गुनासालाई आत्मसाथ गर्दै विकास नपुगेका ठाउँमा अवश्य विकास लैजानेछौं । चुनाव अघि सारिएका एजेण्डालाई हामी पुरा गरेरै छाड्छौं ।’
छलफलमा वडा कमिटी तथा जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रमा भएका गुनासालाई प्रस्तुत गरेका थिए । आफ्नो ठाउँमा भएका विकास तथा अब हुनुपर्ने विकासका बारेमा पनि सांसद पहारी समक्ष जनप्रतिनिधिले सुझाव दिएका थिए ।
सुझाव तथा गुनासालाई सम्वोधन गर्दै पहारीले भने– ‘हामीलाई काम गर्छ भनेर जसरी जिताउनुभयो त्यही अनुसारनै हामी तपाईको विश्वासलाई तोड्ने छैनौ । गर्नैपर्ने कामहरु निरन्तर गरिरहेका छौं ।’ कार्यक्रममा आगामी मंसिर १४ गते हुने प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचन कास्कीबाट उठेकी विद्या भट्टराईलाई विजयी गराउन पनि आग्रह सांसद पहारीले गरे ।
छलफल कार्यक्रममा सांसद पहारीले क्षेत्र नं. ३ ख मा सम्पन्न भएका विकासका योजना र अव शुरु हुने योजनाका बारेमा प्रकाश पारेका थिए । कार्यक्रममा उक्त क्षेत्रकै समानुपातिक सांसद मित्रकुमारी गुरुङ सुवेदीको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
आज गोबर्द्धन पूजा, नेवार समुदायको म्हः पूजा पनि आजै
peacepokhara 31 Oct 2016
गुगल अकाउन्टबाट कसरी डिलिट गर्ने पूराना रेकर्ड ?
peacepokhara 02 Oct 2016
सिलवाल काण्डबारे नयाँ सरकारले छानविन गर्छ ः ओली
peacepokhara 25 Jan 2018